Real Madrid oo go’aan adag ka gaartay arrinta Paul Pogba – miyey isaga hareen raacdadii ay ugu jireen? – Gool FM
Real Madrid oo go’aan adag ka gaartay arrinta Paul Pogba – miyey isaga hareen raacdadii ay ugu jireen?
(Madrid) 2 Luulyo 2019. Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa iney go’aan adag ka gaartay raacdada ay ugu jirto xiddiga doonaya inuu Old Trafford isaga guuro ee Paul Pogba.
Los Blancos waxey qaadatay go’aan aysan uga quusaneynin xiddigaan ilaa maalinta ugu dambeysa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, taasoo ka dhigan iney ka go’an tahay saxiixa xiddigaan kooxdiisa iyo saaxiibadiisba u sheegay inuu meel kale damacsan yahay.
Paul Pogba wuxuu noqday mid hadal heyntiisa ay badan tahay wuxuuna dhexda ka galay mowjado xan ah, iyadoo lagu xaglinayo inuusan wali kala dooran dib ugu laabashada Juventus iyo ka hoos ciyaarista Zidane.
Si kastaba Red Devils waxey xiddigaan duldhigtay 150 Malyan oo Pound, shabakadda AS ayaana qirtay ineysan Los Blancos ka rajo dhigin wali helitaanka Pogba, isla markaana ay isku dayi doonaan saxiixiisa ilaa 2-da September.
Madrid maba aaminsana iney dagaal cadaawadnimo ah kala kulmeyso Juventsu maadaama ay Ramsey iyo Rabiot heleen xagaagan, waxaana ka go’an iney helaan Paul Pogba.